ခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုတာတာမျိုးကို သတိရတယ်လွမ်းပေမယ့် သူမရှိလို့ စိတ်ပျက်အားငယ်တာမျိုးမဟုတ်ကြောင်းကို ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း – Cele Top Stars
ခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုတာတာမျိုးကို သတိရတယ်လွမ်းပေမယ့် သူမရှိလို့ စိတ်ပျက်အားငယ်တာမျိုးမဟုတ်ကြောင်းကို ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း
September 2, 2021 By admin2Celebrity
ချစ်လှစွာသော ပရိသတ်ကြီးရေ ပြီးခဲ့တဲ့သြဂုတ်လ၂၁ရက်နေ့ကဆိုရင်သရုပ်ဆောင် နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း ရဲ့ခင်ပွန်ကကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်၊မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ်။နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း ကကွယ်လွန်သွားတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုလွမ်းတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ကျန်နေသေးတဲ့သားသားမီးမီးအတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောကြားလာပါတယ်နော်….
နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း ကကျမဘဝရဲ့အဓိပ္ပါယ်ခွန်အားရှင်သန်ခြင်းလေးတွေ၊ ကျမယောက်ျားကိုသတိရတာပေါ့၊လွမ်းတာပေါ့၊ဒါပေမယ့်ယောက်ျားမရှိလို့ စိတ်ပျက်အားငယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကျမယောက်ျားထားခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းအသိုင်းအဝိုင်းကောင်းသူ့ရဲ့နာမည်ကောင်းအရိပ်အောက်မှာကျမကအကောင်းဆုံးကြိုးစားပီးရှင်သန်ရပ်တည်ဦးမှာ၊လွမ်းတာတော့အမြဲလွမ်းနေမှာပဲ၊သူနဲ့သွားခဲ့တဲ့နေရာ၊သူနဲ့ရှိခဲ့တဲ့အမှတ်တရတွေက ဘယ်တော့ပျောက်ပျက်မသွားဘူး…။
သူမရှိတော့လို့ကလေးတွေအတွက်ကျမနှစ်ဆကြိုးစားပီးရပ်တည်ရှင်သန်မယ်၊ကျန်နေသေးတဲ့ချစ်တဲ့သူတွေရဲ့ ပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့ပေါ့လွမ်းတာ၊သတိရတာနဲ့ ပြိုလဲတာမတူပါဘူး၊ကျမချစ်ရတဲ့သားလေးနဲ့သမီးလေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းနည်းစွာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ပြီး ချစ်သူတွေစိတ်ပူနေမှာစိုးလို့ပါ၊လွမ်းပေမယ့်ပြိုလဲမသွားပါဘူးဆိုပြီးတော့သူမကပြန်လည်မျှဝေပေးထားပါတယ်…။
ခဈြလှစှာသော ပရိသတျကွီးရေ ပွီးခဲ့တဲ့သွဂုတျလ၂၁ရကျနကေ့ဆိုရငျသရုပျဆောငျ နနျးမွတျဖွိုးသငျး ရဲ့ခငျပှနျကကိုဗဈရောဂါကွောငျ့ကှယျလှနျသှားခဲ့ပွီပဲဖွဈပါတယျ၊မိသားစုနဲ့ထပျတူဝမျးနညျးကွကှေဲရပါတယျ။နနျးမွတျဖွိုးသငျး ကကှယျလှနျသှားတဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူကိုလှမျးတဲ့အကွောငျးလေးနဲ့ကနျြနသေေးတဲ့သားသားမီးမီးအတှကျအကောငျးဆုံးကွိုးစားပွီးရှဆေ့ကျသှားမယျဆိုတဲ့အကွောငျးကိုအခုလိုပွောကွားလာပါတယျနျော….
နနျးမွတျဖွိုးသငျး ကကမြဘဝရဲ့အဓိပ်ပါယျခှနျအားရှငျသနျခွငျးလေးတှေ၊ ကမြယောကျြားကိုသတိရတာပေါ့၊လှမျးတာပေါ့၊ဒါပမေယျ့ယောကျြားမရှိလို့ စိတျပကျြအားငယျတာမြိုးမဟုတျဘူး။ကမြယောကျြားထားခဲ့တဲ့ပတျဝနျးကငျြကောငျးအသိုငျးအဝိုငျးကောငျးသူ့ရဲ့နာမညျကောငျးအရိပျအောကျမှာကမြကအကောငျးဆုံးကွိုးစားပီးရှငျသနျရပျတညျဦးမှာ၊လှမျးတာတော့အမွဲလှမျးနမှောပဲ၊သူနဲ့သှားခဲ့တဲ့နရော၊သူနဲ့ရှိခဲ့တဲ့အမှတျတရတှကေ ဘယျတော့ပြောကျပကျြမသှားဘူး…။
သူမရှိတော့လို့ကလေးတှအေတှကျကမြနှဈဆကွိုးစားပီးရပျတညျရှငျသနျမယျ၊ကနျြနသေေးတဲ့ခဈြတဲ့သူတှရေဲ့ ပံ့ပိုးမှုတှနေဲ့ပေါ့လှမျးတာ၊သတိရတာနဲ့ ပွိုလဲတာမတူပါဘူး၊ကမြခဈြရတဲ့သားလေးနဲ့သမီးလေးအတှကျဆိုပွီးတော့ဝမျးနညျးစှာရေးသားဖျောပွထားပါတယျ။နောကျပွီး ခဈြသူတှစေိတျပူနမှောစိုးလို့ပါ၊လှမျးပမေယျ့ပွိုလဲမသှားပါဘူးဆိုပွီးတော့သူမကပွနျလညျမြှဝပေေးထားပါတယျ…။
ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူ လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ တော်လှန်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းပါဝင်လာတဲ့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့ သားကြီး
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာလို့ အိမ်မက်ထဲမှာဖတ်ပြီးငိုနေရတယ် ဆိုပြီး အိမ်မက်မက်ကြောင်းပြောပြလာတဲ့ မိတ်ကပ်ခင်စန်းဝင်း